Miaraka amin'ny fampandrosoana mitohy amin'ny fiainantsika maoderina, amin'ny lafiny iray, ny fitsipi-piainantsika dia mitondra fiantsonana mendrika. Tsy vitan'ny vokatry ny ezaka mitohy ataon'ireo vahoaka sinoa ireo fa vokatra ihany koa vokatry ny ezaka mitohy ataontsika siansa sy teknolojia. Noho izany, manana foto-kevitra samihafa izahay momba ny fangatahana mitohy sy ny fampiharana ireo akora isan-karazany Misy hevitra samihafa sy fotokevitra fampiharana momba ny zavatra tsara tarehy. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, haingana dia haingana ny fampandrosoana ny indostrian'i Shina, izay nanome fotoana fampandrosoana lehibe ho an'ny indostrian'ny famokarana Shinoa.
Miaraka amin'ny fampandrosoana tsy tapaka amin'ny Internet e-varotra, dia nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny asan'ny mpanamboatra. Eo ambanin'izany tontolo iainana izany, raha maniry ny hitazomana ny tombany mifaninana amin'ny famoahana dingana, ireo mpanamboatra dia mila manova ny lafiny telo amin'ny mpampiasa, ny marketing ary ny fitantanana. Amin'ny alàlan'ny fihazonana hatrany hatrany amin'ny fandrosoana ny fotoana tsy ho fongotry ny tsena.
1. Atsaharo ny maodely marketing
Avy amin'ny fivarotana vokatra ka hatrany am-pivarotana serivisy, ny fanaovana dokam-barotra sy ny fampiroboroboana dia nanjary fifampivarotana tambajotra sy marketing vava. Nandritra izany fotoana izany dia nanipy ny fizotran'ny varotra izany. Taloha, ny fandoavam-bola no fiafaran'ny varotra, ary izy ireo dia manomboka amin'ny varotra. Satria ny fandoavam-bola dia tsy midika tsotra izao ny fivarotana ny vokatra, fa manana ny fampahalalana an'ny mpanjifa ianao dia tokony hanaraka ny vaovao izany ary manohy manangana loharano.
2. Hevitra momba ny fitantanana miovaova hevitra
Taloha, ny asa vaventy lehibe, raha mbola ny kafatra dia mahazo vidiny ambany sy manome vokatra betsaka, fa tsy mahazaka ny mpanjifa mandrakizay. Ankehitriny dia eo amin'ny vanim-potoana fampandrosoana ny Internet izay mangarahara ny vidiny, mitarika ny vidiny sy ny tombom-barotra ambany ary ny fahararian'ny mpanamboatra, nitarika ny fahafatesan'ny tsy fanavaozana, ary tahotra ny fanavaozana. Ny tontolo ety ivelany atrehin'ireo mpanamboatra cléose hose dia mihamitombo, ary mihabe ny fahasarotana. Ity vanim-potoana sarotra ity dia mametraka ny fangatahana avo kokoa amin'ny marketing. Ahoana ny fampiharana ny fitaky ny fanovana fitantanana sy ny fanatsarana ny varotra, miaraka amin'ny fomba fitantanana ny mpanamboatra, ireo mpanamboatra seranana dia mila manorina foto-kevitra amin'ny Internet, mametraka paikady «mampihena ny vidin'ny fandidiana» ary manangana rafitra "famakafakana lehibe", toy ny hahatratrarana haingam-pandeha haingana kokoa amin'ny tontolo 3. Ny paikady no manohana bebe kokoa.
Ny fitantanana dia hitari-tena mavitrika ary hampihena ny risika amin'ny fomba mahomby kokoa.